Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) (72909-34-3) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker
methoxatin ဟုလည်းခေါ်သည့် Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည် redox cofactor ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမြေဆီလွှာနှင့် kiwifruit ကဲ့သို့သောအစားအစာများတွင်တွေ့ရပြီး…… ..
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) (72909-34-3) ဗီဒီယို
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) (72909-34-3) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ထုတ်ကုန်အမည် Pyrroloquinoline quinone (PQQ)
ဓာတုအမည် Coenzyme PQQ; Methoxatine; Pyrrolo-quinoline quinone;
CAS အရေအတွက် 72909-34-3
Boliing ပွိုင့် 1018.6 ± 65.0 ° C (ခန့်မှန်း)
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပွိုင့် 569.8 ° C (1,057.6 ° F; 842.9 K)
သိပ်သည်းဆ 1.963 ± 0.06 g / cm3 (ခန့်မှန်း)
အရောင် လိမ္မော်ရောင် - အနီရောင်အစိုင်အခဲ
လြှောကျလှာ PQQ သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင် / cofactor အဖြစ်နှင့် antioxidant အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်၊ အစားအစာအစားထိုးခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောအရက်ဆိုင်များကဲ့သို့သောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာများတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဘာဖြစ်သလဲ Pyrroloquinoline quinone(PQQ)?
methoxatin ဟုလည်းခေါ်သော Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည် redox cofactor ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမြေဆီလွှာနှင့် kiwifruit ကဲ့သို့သောလူ့ရင်သားနို့များတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ Pyrroloquinoline quinone သည် pyrroloquinoline ဖြစ်သည်။ ၄၊ ၅ နေရာများတွင် oxo အုပ်စုများရှိပြီး ၂-၇၊ ၇ နှင့် ၉ တို့တွင် carboxy အုပ်စုများရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်နှင့် cofactor အဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ဆဲလ်များကိုခွဲခြားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပရိုတိန်း kinases များအတွက်အချက်ပြပစ္စည်းဖြစ်သည်။ မြင့်မားသော redox ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစွမ်းရည် PQQ သည်၎င်းအား neurodegeneration နှင့်ကင်ဆာကိုကာကွယ်ရန်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာအခန်းကဏ္giveကိုပေးလိမ့်မည်။ (redox agent အနေဖြင့် Pyrroloquinoline quinone သည်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးအက်စကောဘစ်အက်စစ်၊ quercetin နှင့် epicatechin ကဲ့သို့သောအခြား antioxidants များထက်ပိုမိုသောဓာတ်ပြုမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
Pyrroloquinoline quinone သည်ဇီဝဓာတ်ပြုပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများတွင်အင်ဇိုင်းဓာတ်သတ္တိအဖြစ်တည်ရှိသည်။ သုတေသနများအရ Pyrroloquinoline quinone သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတစ်လျှောက်တွင်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်အချက်တစ်ချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများကြီးထွားခြင်းတွင်တည်ရှိသည်။ Pyrroloquinoline quinone သည်တိရိစ္ဆာန်များတွင်ရှင်သန်မှုအကျိုးကျေးဇူးများ (ဥပမာ - မွေးကင်းစကလေးမွေးဖွားမှုတိုးတက်ခြင်းနှင့်မျိုးပွားခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်) နှင့်အတူဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်ဟုသတင်းပို့သည်။
ထို့အပြင် Pyrroloquinoline quinone သည် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသော antioxidant နှင့် B-vitamin ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည် mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့်အာရုံခံဆဲလ်များကို oxidative ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ လူသားများတွင်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအရ Pyrroloquinoline quinone သည်ကာလတိုမှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းတို့ကိုတိုးပွားစေပြီးရောင်ရမ်းခြင်းအမှတ်အသားများကိုလျော့နည်းစေပြီးသုခချမ်းသာ၏ယေဘူယျခံစားချက်များကိုတိုးတက်စေသည်။
ဘယ်လို Pyrroloquinoline ပါဘူး သစ်ပင်(PQQ) အလုပ်လား
ကြွက်လေ့လာမှုများ mitochondrial ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်အတွက် Pyrroloquinoline quinone များအတွက်အထင်ကြီးထိရောက်သောပြသပါ။ 10-30 ဇ 24-48 μMမှာ PQQ နှင့်အတူပေါက်ဖွားကြွက် hepatocytes "တိုးမြှင့် citrate synthase နှင့် cytochrome က c oxidase လှုပ်ရှားမှု, Mitotracker အစွန်းအထင်း, mitochondrial DNA ကိုအကြောင်းအရာနှင့်ဆယ်လူလာအောက်စီဂျင်အသက်ရှူပြ။ ဒီဖြစ်စဉ်၏ induction cAMP တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် - binding ပရိုတိန်း (CREB) နှင့် peroxisome proliferator-activated အဲဒီ receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α), mitochondrial ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများတဲ့လမ်းကြောင်း၏ activation မှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ " in vivo ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများသည် PQQ (2mg PQQ / kg kg အစားအစာ) နှင့်အတူအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်းမှအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုပြသည်။ ၎င်းတွင်ပလာစမာ triglycerides လျော့နည်းသွားခြင်း၊ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်တိုးခြင်း (hepatic mitochondrial ပါ ၀ င်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း) နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ / reperfusion ကိုပိုမိုသည်းခံနိုင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးဒဏ်ရာ၏စမ်းသပ်မှုပုံစံများအရ Pyrroloquinoline quinone သည်အာရုံကြောဆဲလ်သေဆုံးခြင်းကို N-methyl-d-aspartic acid (NMDA) receptors များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ကြွက်များပုံစံများအရ Pyrroloquinoline quinone ဖြည့်စွက်ဆေးသည်အာရုံကြောဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးဓာတ်ပြုနိုင်သည့်အောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်များကိုဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနှင့်ထပ်မံယန္တရားများမှကာကွယ်နိုင်ရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
၏အကျိုးကျေးဇူးများ Pyrroloquinoline quinone(PQQ) အကျိုးကျေးဇူးများ
ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင် PQQ သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။
- စQQ သည်အကောင်းဆုံး mitochondrial function ကိုထောက်ပံ့သည်
Mitochondria သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များရှိစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ လက်ရှိ mitochondria များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် mitochondrial မျိုးဆက်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် PQQ, ထို့ကြောင့် ATP (Energy) ကိုထုတ်လုပ်ပါ။ ပိုပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ mitochondria၊ စွမ်းအင်များများလေ။
- PQQ သည်အာရုံကြောကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်
PQQ သည် Nerve Growth Factor (NGF) ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်၊ ပျက်စီးသွားသော ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်အသက်၊ လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ် neurodegenerative မမှန်မှုများကြောင့်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှု (မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သင်ယူခြင်းအခက်အခဲစသည်တို့) ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်နှလုံးနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ischemic ဖြစ်ရပ်များမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
- PQQ သည် oxidative stress ကိုကာကွယ်ပေးသည်
PQQ သည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးကာကွယ်မှုကိုပေးပြီးကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များကိုအောက်စီဂျင်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးပြီးအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုဖယ်ရှားသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းကိုအားပေးပြီး antioxidant နှင့် B ဗီတာမင်ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုအသစ်ရှိသော cofactor အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ထို့အပြင် PQQ သည်အသည်းပျက်စီးမှုနှင့်ပြင်းထန်သောကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးကုသနိုင်သည်။
၏လျှောက်လွှာ / အသုံးပြုမှု Pyrroloquinoline quinone(PQQ)
Food Style ဆေးဂျာနယ်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတွင် Pyrroloquinoline Quinone သည်ကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသက်၊ လေဖြတ်ခြင်း (သို့) အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းရောဂါများနှင့်နှလုံးနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များမှကာကွယ်မှုကြောင့်သိမြင်မှုကျဆင်းခြင်း (မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သင်ယူခြင်းအခက်အခဲစသဖြင့်) ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ အလားတူရလာဒ်များကို ၂၀၁၁ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Pyrroloquinoline Quinone သည်နို့အခြေစိုက်အစာအစားထိုးအဖျော်ယမကာများကဲ့သို့သောအဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာအဖြစ်တိုက်ရိုက်ပေးခဲ့သည်။
အလုံအလောက်ရဖို့ဘယ်လို Pyrroloquinoline quinone(PQQ)?
အသက်တာ၌၊ အချို့သောအစားအစာများမှ PQQ ကိုသင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ငရုတ်ကောင်း၊ parsley၊ လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ် kiwifruit စသည်ဖြင့်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်အမျိုးမျိုးတွင်သဘာဝရှိသည်။ သို့သော်လူတစ်ယောက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားသောအစားအစာအရေအတွက်ကိုအများဆုံးစားပါ။ ငါတို့နေ့စဉ်အစားအစာမှ PQQ အလုံအလောက်မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုအကျိုးကျေးဇူးများရရှိလိုပါက PQQ အစားအစာဖြည့်စွက်စာကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများဖြင့် PQQ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။
Felton LM, Anthony C (2005) ။ "ဇီဝဓါတုဗေဒ: နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအင်ဇိုင်း cofactor အဖြစ် PQQ ၏အခန်းကဏ္?ကို" သဘာဝ။ 433 (7025): E10, ဆွေးနွေးမှု E11-2 ။ Doi: 10.1038 / nature03322 ။ PMID 15689995 ။
Westerling J ကို, Frank J ကို, Duine ဂျာ ​​(1979) ။ "Hyphomicrobium X မှ Methanol dehydrogenase ၏ခြေတုလက်တုအုပ်စု - quinone ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အီလက်ထရွန်လှည့်ဖျားပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုအထောက်အထား" ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Commun ။ 87 (3): 719-24 ။ Doi: 10.1016 / 0006-291X (79) 92018-7 ။ PMID 222269 ။
Matsutani M က, Yakushi တီ Pyrroloquinoline acetic acid ကို bacteria.Appl Microbiol Biotechnol ၏ quinone- မှီခို dehydrogenases ။ 2018 နိုဝင်ဘာ; 102 (22): 9531-9540 ။ Doi: 10.1007 / s00253-018-9360-3 ။ Epub 2018 စက်တင်ဘာ 15 PMID: 30218379 ။